Soo dejisan Google Drive 1.23.9648.8824 – Windows – Vessoft
Soo dejisan Google Drive
Google Drive – software ah in ay daruuri ka shirkadda Google ee kaydinta shaqeeyaan. software The awood si loo badbaadiyo xaddi gaar ah oo xogta on server fog iyo ku wadaagaan macluumaadka ku kaydsan la saaxiibo. Google Drive waa inay awoodaan in la furo helaan mashaariic u gaar ah, kuu ogolaanaya in aad si wadajir ah edit maaddadu ay isku mar la isticmaala kale. software waxa uu u qabtay qalabka reserved goobaha lagama maarmaanka u ah baahida shakhsiyeed. Sidoo kale Google Drive taageertaa .Wadashaqayntaas xogta u dhexeeya qalabka mobile oo ku salaysan nidaamka qalliinka kala duwan.
Shaqeeyaa qaabab file kala duwan
tafatirka Wadajirka ah ee wax
.Wadashaqayntaas Qalabka kale
Isku dhex adeegyada Google
Google Drive Software la xiriira:
Files software The in uu kaydiyo faylasha kasta oo lagu kaydiyo daruurtii. software wuxuu taageeraa .Wadashaqayntaas of files u dhexeeya qalabka iyada oo internet-ka.
Files qalab caanka ah si ay u maareeyaan faylasha iyo xubno kala duwan oo ka mid ah nidaamka. software wuxuu taageeraa plugins badan oo waxtar leh iyo korontada dhisay-in.
English, Français, Español, Deutsch... Dropbox 12.4.22
Files Qalab ayaa si xor ah u dejisan macluumaadka kala duwan lagu kaydiyo daruurtii. Software wuxuu taageeraa .Wadashaqayntaas xogta iyo is-dhaafsiga haboon ee files.
English, Українська, Français, Español... SHAREit 3.4.0.1023
Files software The for kala iibsiga dhakhso ah files of noocyo kala duwan ama tirada. software wuxuu taageeraa dhaafsiga xogta u dhexeeya qalabka kala duwan iyo kombiyuutarada isku mar.
Files Software in aan kala tagno files Qaybo oo ay ku biiraan iyaga intaas ka dib. Software taageertaa files of tirada iyo qaabab kala duwan.
EaseUS Todo PCTrans 9 Free iyo Pro
Files software The si ay u gudbiyaan xogta iyo software ka mid computer ah in kale iyada oo loo marayo shabakad agtaada ah ama iyadoo la abuurayo image file a.
Recuva 1.53.1087 Standard iyo Portable
العربية, English, Українська, Français... TeraCopy 2.3
Files software ah in nuqul ka iyo guuraan files si deg deg ah. Dhismaha ee software-ka waxaa ka mid ah sifooyinka badan oo kala duwan in ay bixiyaan dhaw raaxadeeda waxa ugu badan ee koobiyeynta ah.
العربية, English, Français, Español... Recover My Files 5.2.1.1964
العربية, English, Українська, Français... Easy MP3 OGG WMA WAV Cutter 2.1
Wadayaasha Xirmada codsiyada shaqada wax ku ool ah oo ka mid ah files warbaahinta iyo ciyaaraha. Software ayaa saamayn ku nidaaminta walxaha graphic, il dhawaaqa iyo ayna kulan.
العربية, English, Українська, Français... AnyTrans 5.1.1
Phone software The for kala iibsiga file laba-jid u dhexeeya iPhone, iPod, iPad iyo computer ah. software waxay leedahay set oo ah qalab si ay u maareeyaan xogta.